Dhaabata mootummoota gamtoomanitti ejensiin dhimma baqattootaa/UNHCR lammiilee biyyaa Ripablikii Afrikaa Walakkeessaa warren wal waraansa baqatani Koongoo Dimokiraatiik Republiik keessaa qubataan 5000 ta’an fedhii isaaniitiin gara biyyaa isaanitti deebisuu jalqabuu isaa ibseera.
Akka Liisaa Sheelayen Jeenevaa irraa gabaasteetti, baqattootaa biyyaa isaanitti deebisuun kan jalqabame bara 2020 ture. Garuu yeroo tokko sababa Kooviid 19n biyyootan lamman waan daangaa isaanii cufaniif, ji’a Muddee darbee keessa immoo filannoo prezidaantumaatiin walqabatee hokkora ka’een danqamee ture.
Dubbi himtuun UNHCR Shaabiyaa Maantoo akka jedhanitti mooraa baqattootaa Moolee jedhamu irraa baqattoonni 250n jemaataa darbe yemmuu bahan 250 immoo guyyaa qibxata gara biyya isaanitti imala jalqabaniiru.
Akka dubbi himtuun UNHCR jedhanitti waligaltee dhaabanni isaanii Mootummoota Koongoo Demokiraatik Repablikii fi Repabliikii Afrikaa Walakkessa waliin baraa 2019 taasiseen baqattoonii 10,000 ta’an fedhidhaan biyya isaanitti deebi’uudhaaf galmawaniiru.
Lammileen R. A. W / CAR 206, 346 ta’an K.D.R keesaa mooraa baqattootaa 3 fi hawaasaa biyyaatti keessaa jiraatu.
Erga bara 2013 hookkorii hidhattootaa gidduutti jalqabamee as lammiileen R.W.A 680,000 ta’n biyyoottan Kaameeruun, K. D.R, fi Chaad keessaa baqattootaa fi koola galtootaa ta’anii yemmuu jiran namoonni 630,000 ta’an immoo biyyaa isaanii keessati qe’ee isaanii irraa buqqa’anii jiraatu.